२ बालबालिका सहित १६१ जनाको मृत्यु २५,१५० जनामा कोरोना संक्रमण - Gulmeli Online TV
२ बालबालिका सहित १६१ जनाको मृत्यु २५,१५० जनामा कोरोना संक्रमण
२३ फाल्गुन २०७८, सोमबार १६:२४
नारायण भण्डारी हङकङ७ मार्च २०२२
हङकङ स्वास्थ्य विभागको सेन्टर फर हेल्थ प्रोटेक्शन (CHP) का डा अल्बर्ट औ (प्रिन्सिपल मेडिकल एण्ड हेल्थ अफिसर इपिडेमियोलोजी ले दैनिक रुपमा गर्दै आएको पत्रकार सम्मेलनमा आज १६ः३० बजे २५,१५० जना नयाँ कोभिड-१९ पुष्टि भएको वताएका छन। । तीमध्ये ३२ वटा मुद्दा आयातित हुन भने बाँकी २५ हजार १ सय १८ स्थानीय केसहरु रहेका छन।
नयाँ पुष्टि भएका मध्ये एक हजार ९८० अस्पताल प्राधिकरणबाट, २ हजार ४४४ स्वास्थ्य विभागको जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाबाट र बाँकी २ हजार ७५६ निजी प्रयोगशाला वा सामुदायिक परीक्षण केन्द्रबाट पुष्टि भएका छन। परीक्षण गरिएका २,४४४ मामिलाहरूमध्ये डेल्टा भेरियन्टमा शुन्य केसहरू थिए। १६९० केसहरू ओमिक्रोन भेरियन्टमा समावेश थिए जबकि ७५४ केसहरू अझै परीक्षण गर्न बाकी रहेका छन।
आयातित केसहरू मध्ये २५ इन्डोनेसियाका थिए र तिनीहरू सबै गरुडा इन्डोनेसियाको उडान नं. GA 876. यात्रुमा २४ महिला र १ पुरुष रहेका छन् । फलस्वरूप, जकार्ताबाट गरुडा इन्डोनेसिया अन्तर्गतका सबै यात्रु उडानहरू २ हप्ताको लागि २१ मार्च सम्म हङकङमा अवतरण गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ।
पाँचौं लहरमा कुल २ हजार ७४ जनाको मृत्यु भएको डा. मृत्यु दर लगभग ०.४३% मा थियो। मृतक बिरामीहरूमा ११ महिनादेखि १०८ वर्षसम्मका बिरामीहरू समावेश थिए जसको औसत उमेर ८५ वर्ष थियो। १४० केसहरूमा जीनोम अनुक्रमको नतिजाले मृतक बिरामीहरूमध्ये ११७ ओमिक्रोन भेरियन्टबाट संक्रमित थिए भने १३ जना लाई डेल्टा भेरियन्टबाट संक्रमित भएको देखाउँछ। भाइरल लोडका कारण १० केसहरू निर्धारण गर्न सकिएन। मृतक बिरामीहरूमध्ये ९४.८% ६९ वर्ष माथिका वृद्धहरू थिए र तिनीहरूमध्ये ६८.५% ८५ वर्ष माथिका वृद्ध बिरामीहरू थिए। मृतक बिरामीहरूमध्ये ९०.६% खोप लगाइएको थिएन। २ वटा खोप वा सोभन्दा माथिको खोप लिनेहरूको मृत्युदर लगभग ०.०५% मात्र छ भने एउटा मात्र खोप शट वा नदिनेहरूको मृत्युदर १.४% छ जुन २८ गुणा बढी हो।
सीएचपी नियन्त्रक डा. एडविन सुईका अनुसार उनले दैनिक ३०,००० देखि ५०,००० मामिलाहरू रिपोर्ट गरिएको र पछिल्लो अक्टोपस रेकर्ड अनुसार, हङकङका नागरिकहरूले पछिल्लो एक हप्तामा समुदायमा अत्यावश्यक यात्रा घटाएको बताए।
आज १५३ जनाको मृत्यु संगै दैनिक घटदै कोरोना संक्रमित ३१००८ जना
हङकङ नेपाली माहासंघलाई बेईजिङ केन्द्र सरकारबाट आयो कोरोना भाईरस संग लड्ने औषधी र र्यापिड एन्टिजेन किट